စတော့အညွှန်းကိန်းများ | စီးပွားရေးဘဏ္ဍာရေး
Ibex ၊ Nasdaq က မင်းနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာသေချာပါတယ်... ဒီဝေါဟာရတွေက ဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာ အတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး။ အင်း၊ ဒါတွေက စတော့ညွှန်းကိန်းတွေပါ၊ အဲဒါတွေက ဘာလဲဆိုတာ မင်းသိလား။
နောက်တစ်ခု ကျွန်တော်တို့ သွားမယ်။ စတော့အညွှန်းကိန်းများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်သည်၊ ၎င်းတို့တွင် လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် အမျိုးအစားများကို ရှင်းလင်းပါ။ ယနေ့တည်ရှိသည်။ ဘာသာရပ်ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဆက်ဖတ်ဖို့ မတွန့်ဆုတ်ပါနဲ့။
1 စတော့အညွှန်းကိန်းတွေက ဘာတွေလဲ။
4 ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်စတော့ညွှန်းကိန်းတွေရှိလဲ။
စတော့အညွှန်းကိန်းများ၊ stocks index လို့လည်း ခေါ်တယ်၊ တကယ်ရှိလား။ စာရင်းပြုစုထားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ဈေးနှုန်းကွဲလွဲမှုကို သိရှိရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အညွှန်းများ၊ လက္ခဏာတွေ ဆက်တိုက်တွေ့နေသမျှ ကာလပတ်လုံး။
တစ်နည်းဆိုရသော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စတော့စျေးကွက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် တန်ဖိုးအစုတစ်ခုအား ပေးဆောင်သည့် ရည်ညွှန်းတန်ဖိုးတစ်ခုအကြောင်း ပြောနေခြင်းဖြစ်ပြီး တစ်ချက်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် အချိန်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် စျေးနှုန်းမည်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်ကို သင်မြင်နိုင်စေရန်၊ .
ဤကိန်းဂဏာန်းတန်ဖိုးကို လူတစ်ဦးမှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ ကုမ္ပဏီအခြေအနေ မည်သို့လုပ်ဆောင်နေသည်ကို စိတ်ကူးရနိုင်စေရန်အတွက် ဤကိန်းဂဏာန်းတန်ဖိုးကို ကောင်းစွာမြင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းမပြုပါက ပိုကောင်းပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် တည်ရှိနေသော စတော့ညွှန်းကိန်းများ ၊ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးမှာ Dow Jones Transportation Average၊ Charles Dow (ထို့ကြောင့် သူ့အမည်) သည် သတင်းထောက်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး Wall Street Journal ကို တည်ထောင်သူ အတိအကျဖြင့် ဇူလိုင် 3၊ 1884 တွင် ဖန်တီးခဲ့သော အညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ ၁၁ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ၉ ခုမှာ ရထားလမ်းဖြစ်သည်။
ယခုသင်စတော့အညွှန်းကိန်းများသည် မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကို သိသောအခါ၊ ရည်မှန်းချက်များသည် မည်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကို သင့်တွင် အကြံဥာဏ်တစ်ခုရနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော် ပိုမိုရှင်းလင်းစေရန်၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားသည်။
သူတို့က စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုင်းတာရာမှာ ကူညီပေးတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုကိုမြင်နိုင်ခြင်းဖြင့်၎င်းနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ရွေးချယ်မှုကောင်းရှိ၊ မရှိကိုသင်သိနိုင်သည်။ ဒါမှ မန်နေဂျာတွေကို ပိုကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေ လုပ်ခွင့်ပေးတယ်။
၎င်းသည် စျေးကွက်တွင် အမြတ်အစွန်း သို့မဟုတ် စွန့်စားမှုရှိမရှိ သိနိုင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် မတူညီသောစျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုများကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ၎င်းနှင့်လုပ်ဆောင်ရန် အချိန်ကောင်းဟုတ်၊ မဟုတ်ကို သိနိုင်သည်။
အချို့ကိစ္စများတွင်၊ စတော့အညွှန်းကိန်းများ ၎င်းတို့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ထုတ်ကုန်များ၏ အခြေခံဖြစ်လာသည်။
ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုကို တိုင်းတာရန် ခွင့်ပြုသည်။ သိသာထင်ရှားသည်က ၎င်းသည် 100% ယုံကြည်စိတ်ချရသောညွှန်ပြချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ တစ်ခုမျှနီးပါးမရှိသော်လည်း အသင့်လျော်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်အတွက် အဆိုပါ variable တန်ဖိုးများကိုရယူခြင်း beta (စမ်းသပ်မှု) ကို သင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
အစကို သတိရရင် အဲဒါကို သိလိမ့်မယ်။ စတော့အညွှန်းကိန်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်၊ ၎င်းတို့ထဲမှများစွာရှိသည်။ အတွေ့ရအများဆုံးမှာ များသောအားဖြင့် ၃ မျိုးဖြစ်သော်လည်း ကျွမ်းကျင်သူများသည် ၎င်းတို့ကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အတိအကျအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် ဤအညွှန်းကိန်းများကို မည်သည့်နေရာမှ ရောက်ရှိလာသည် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့လည်ပတ်သည့်နေရာအပေါ် အခြေခံထားသည်။ မည်ကဲ့သို့ အမျိုးအစားခွဲခြားရသနည်း။
တိုင်းရင်းသားများ။ ပိုင်ဆိုင်မှုကို တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံသာ လုပ်ကိုင်ကြသောအခါ၊
နိုင်ငံတကာ။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ တော်တော်များများ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေ ရောက်တဲ့အခါ၊ တစ်နိုင်ငံတည်းသာရှိလျှင် ကျန်သည့်နိုင်ငံ တစ်ခုတည်းရှိလျှင် အရေးမကြီးပါ၊ ထိုတစ်ခုသည် နိုင်ငံတကာဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ။ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်အနည်းငယ်တွင် မစုစည်းဘဲ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ရှိနေသောကြောင့် ယခင်နှင့် မတူပါ။
ဒုတိယ အသုံးအများဆုံး အမျိုးအစား အမျိုးအစားမှာ ကုမ္ပဏီ အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည်မှာ-
ကဏ္ဍညွှန်းကိန်းများ. ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ထူထောင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဟာ တိကျတဲ့ ကဏ္ဍတစ်ခုကို အာရုံစိုက်လာတဲ့အခါ။
ကဏ္ဍခွဲ။ အခြားသူများနှင့်မတူဘဲ၊ ဤနေရာတွင် သင့်တွင်ကဏ္ဍတစ်ခုတည်းရှိမည်မဟုတ်သော်လည်း ၎င်းတို့ထဲမှ အများအပြားရှိမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ အတွေ့ရအများဆုံး အမျိုးအစားခွဲခြားမှုများသည် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး၊ အညွှန်းကိန်းများကို အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း-
အမျိုးမျိုးသောဝင်ငွေ။ ပိုင်ဆိုင်မှုကို အဓိကထားတဲ့အခါ စတော့ရှယ်ယာတွေ၊
ပုံသေငှားရမ်းခ။ ချည်နှောင်မှုနှင့် တာဝန်များ ပါဝင်လာပါသည်။ ဤဒုတိယကိစ္စတွင်၊ ၎င်းတို့သည် မည်သည့်အမျိုးအစားဖြစ်မည်နည်း။
ကုန်ကြမ်းများ။ အတိအကျပြောရရင် ငွေ၊ ဆီ၊ ရွှေ...
စတော့အညွှန်းကိန်းတစ်ခုချင်းစီအကြောင်းပြောရင် တော်တော်ပျင်းစရာကောင်းပြီး ငြီးငွေ့စရာကောင်းပါတယ်။ သို့ရာတွင်၊ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကို ပိုမိုအသုံးပြုကြသည် (သို့မဟုတ် ပိုလူသိများသည်) ရှိပါသည်။
ကျနော်တို့ကိုရည်ညွှန်းသည် Dow Jones (အမေရိကန်တွင်); Nasdaq (အမေရိကန်တွင်လည်း); Eurostoxx50 (ဥရောပတွင်); Nikkei (ဂျပန်); သို့မဟုတ် Ibex35 (စပိန်တွင် နှင့် အရင်းအနှီးနှင့် ငွေဖြစ်လွယ်မှု မြင့်မားသော ကုမ္ပဏီ 35 ခု ပါ၀င်သော အဓိက ကုမ္ပဏီ)။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သောအရာများသည် တည်ရှိနေသောတစ်ခုတည်းသော အရာများမဟုတ်ပေ။ တကယ်တော့ နိုင်ငံ (သို့မဟုတ်) တိုက်ကြီးပေါ် မူတည်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးထက်ပို၍ ရှာနိုင်သည်။ ဥပမာ:
၏ဖြစ်ရပ်အတွက် အမေရိကန်Dow Jones နှင့် Nasdaq အပြင်၊ အကျော်ကြားဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးမှာ S&P 500 ဖြစ်ပြီး၊ ကိန်းဂဏန်းဖော်ပြသည့်အတိုင်း New York Stock Exchange နှင့် Nasdaq တို့တွင် ကုမ္ပဏီပေါင်း 500 ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ငါတို့သွားလျှင် ဥရောပထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် စတော့ညွှန်းကိန်း သုံးခုရှိသည်။ များမှာ-
ဂျာမန်နွယ်ဖွား Dax 30 သည် Frankfurt စတော့အိတ်ချိန်း၏ အရေးကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီ 30 ပါဝင်သည်။
လန်ဒန်မှ မူရင်း FTSE 100 နှင့် အရေးအကြီးဆုံး ကုမ္ပဏီ 100 တို့နှင့်အတူ Dow Jones ကဲ့သို့ပင်၊ ဤစတော့အညွှန်းကိန်းကို Financial Times သတင်းစာက ဖန်တီးခဲ့သည်။
CAC 40 သည် ပြင်သစ်စတော့ဈေးကွက်မှသာလျှင် ကုမ္ပဏီ ၄၀ နှင့် ထပ်မံလုပ်ဆောင်သည်။
အပိုင်းကို ပြန်သွားတာပေါ့။ အမေရိက သို့သော် ဤကိစ္စတွင်၊ တောင်ပိုင်းတွင်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိသော အဓိကစတော့စျေးကွက်ညွှန်းကိန်းများ (အနည်းဆုံးစပိန်တွင်) များမှာ-
Bovespa သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး Sao Paulo စတော့အိတ်ချိန်းတွင် ကုမ္ပဏီ ၅၀ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
IPC၊ မက္ကဆီကန်နှင့် Carlos Slim တို့က ထိန်းချုပ်ထားသည်။
IBC Caracas သည် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏ အဓိကအညွှန်းကိန်းဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီ ၁၆ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
Buenos Aires စတော့အိတ်ချိန်းတွင် အရေးအကြီးဆုံးကုမ္ပဏီများကို သင်ရှာတွေ့သည့် အာဂျင်တီးနားမှ Merval။
MSCI လက်တင်အမေရိက။ ၎င်းသည် ဘရာဇီး၊ ပီရူး၊ မက္ကဆီကို၊ ချီလီနှင့် ကိုလံဘီယာတို့မှ ကုမ္ပဏီကြီးများ ပါ၀င်သောကြောင့် နိုင်ငံတကာ စတော့စျေးကွက် အညွှန်းကိန်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
အာရှအဆင့်မှာNikkei အပြင်၊ မှတ်သားစရာမှာ SSE Composite Index သည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် အရေးအကြီးဆုံး၊ KOSPI၊ တောင်ကိုရီးယားဘက်မှ၊ အိန္ဒိယမှ BSE Sensex၊ o ဟောင်ကောင်မှ Hang Seng Index။
အခုအချိန်မှာ ဘယ်စတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်းတွေအကြောင်း ပိုရှင်းသွားပြီလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » ဘဏ္productsာရေးထုတ်ကုန်များ » Bolsa » စတော့အညွှန်းကိန်းတွေက ဘာတွေလဲ။
Paypal ဖြင့် Bitcoins ကိုဘယ်လိုဝယ်မလဲ။